Madaxda Madasha Wadatashiga Qaran oo go'aan ku gaaray in dib loogu celiyo Doorashada shan kursi. | SAHAN ONLINE
Madaxda Madasha Wadatashiga Qaran oo go’aan ku gaaray in dib loogu celiyo Doorashada shan kursi.
MUQDISHO – Madaxa Hoggaanka Qaran(MHQ) ayaa go’aan kasoo saaray kuraastii khilaafku ka taagnaa ee Aqalka hoose ee Baarlamaanka ,kuwaasoo ay soo gudbiyeen guddiga xalinta Khilaafaadka Baarlamaanka Soomaaliya.
Madasha ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 5 curse oo kamid ah 11-kii kursi ee la isku khilaafay dib loogu celiyo doorasho,waxay kaloo guddigu fasaxeen 7-dii kursi oo kale ee khilaafku ka taagnaa.
Doorashada 5-kursi ayaa loo xil-saaray guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul-goboleed.
Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho 25 – 26 Disembar 2016-ka. Kulankan wuxuu daba socday kullankii madasha ee lagu qabtay magaalada Muqdisho, taarikhdu markay ahayd 15kii-24dii Disember, 2016. Ujeedada kulankan ayaa ahaa go’aan ka gaarista iyo dhameystiridda arrimaha ka harsan dooroshada dadban ee Golaha Sharci dejinta Qaranka ee 2016ka.
▪ Ka dib markii ay dhageysatay warbixinta iyo tallooyinka Guddiga Xainta Khilaafaadka kullankoodii 26 December -2016
▪ Ka baaraandegtay nuxurka iyo duruufaha heeraariyey doorashada kuraasta muranka galey
▪ Fiiro-gaar ah u yeelatay macluumaadka dheeriga ah ee laga helay xog-isweydaarsiga MHQ iyo GXKHDD
Sidaas daaraadeed MHQ waxay guddomisay
a. In 5ta kursi ee hoos ku qoran dib loogu celiyo doorasho, laguna qabto mid walba degaaan-doorashadii horey loogu soodoortay, kuwaasi oo kala ah:
1) DRD/0010/PL Ugaar Saleebaan
2) HW/0055/GM Murusade
3) HW/0094/JL Gaaljecel
4) DM/0156/KG Macallin Wayne
5) HW/0208/HSH Jidle
Taariikhda dib-u-doorashada kuraastaas iyo abaabulka doorashooyinka waxaa loo xilsaaray guddiyada Doorashooyinka dadban ee heer federal iyo heer Dawlado Goboleed;
7da kursi ee kale oo ka mid ahaa 11kii kursi ee horay uu u hakiyey GXKHDD waa la fasaxay, Waxaana la farayaa Guddiga Doorashooyinka Dadban ee heer Fderaal inay xildhibaanada kuraastan ku guuleystay ay siiyaan shahaadadooda xildhibaannimo.
Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dawlad Goboleed iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka waxaa laga codsanayaa in ay sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurtogalka usoo dhamaystiraan hawlaha doorashoyinka weli dhiman ee mid walba hor yaal.